Waa in degaan lagu saleeyaa doorashadda 2016″ ee somaliya ma doonayno 4.5 hadaan la yeelin puntland way tashan dontaa .dhamaan waa hadalada joogtada ah ee madaxweyne gaas ka soo yeera.Dr,gaas puntland ma wuxuu ku maamulaa 3.5 mise degaan bay ku saleesan tahay? | Gabiley News Online
Waa in degaan lagu saleeyaa doorashadda 2016″ ee somaliya ma doonayno 4.5 hadaan la yeelin puntland way tashan dontaa .dhamaan waa hadalada joogtada ah ee madaxweyne gaas ka soo yeera.Dr,gaas puntland ma wuxuu ku maamulaa 3.5 mise degaan bay ku saleesan tahay?
Waa in degaan lagu saleeyaa doorashadda 2016″ ee somaliya ma doonayno 4.5 hadaan la yeelin puntland way tashan dontaa .dhamaan waa hadalada joogtada ah ee madaxweyne gaas ka soo yeera.Dr,gaas puntland ma wuxuu ku maamulaa 3.5 mise degaan bay ku saleesan tahay?.
Waa in degaan lagu saleeyaa doorashada 2016, ma doonayno 4.5 hadan la yeelin puntland way ka tashan .Dhamaan waa hadaladda joogtada ah ee madaxweyne gaas ka soo yeera Hadaba Dr.gaas oo ah madaxweynaha dawlad Goboleedka puntland ma ku noqdey madaxweyne doorasha ka timid degaan? Mise waxa uu ku fadhiyaa 3.5 la sameeyey 1988 tasoo ah mid marag madoonta ah INAAN NIN AAN MAXAMUUD SALEEBAAN AHAYN UUNAN NOQON KARIN madaxweyne.
Hadaba su,aashu waa Dr.gaas haday ka tahay cadaalad doon muu ka bilaabo kuraasta ka hoosaysa isaga inuu cadaalad iyo degaan ugu qaybiyo shacabka reer puntland isla markaana uu u diyaariyo puntland siday uga bixi lahayd 3.5 ee dilootey maamulka.
Mise masaaliixdii 3.5 puntland baa gashay somaliya in degaan wax lagu doorto.
Hadaba sabaankan waa sabaankee dadkuna waa dadkee? Sabaanku 2016 dadkuna waa dadkuna waa ka gudbeen inay ku samraan dulmi.
Waxaad la socon doontaan maqaal taxana ah oo aan kaga faaloon doono maamulka puntland sida ay tahay aragtidayadu.